राम्रो बोलचाल नभएका २० कलाकारहरू, कसको कोसँग छैन राम्रो सम्बन्ध ? – Sandes Post
April 11, 2022 2160
मनोरञ्जनको रङ्गिन दुनियाँमा असल मित्र भेट्न कठिन छ । भेटिहाले पनि विश्वास र भरोसा गर्न कठिन ।एक–अर्कालाई होच्याउने, पछाडिबाट खुट्टा तान्ने कारण पनि सहजै कसैले कसैलाई विश्वास गर्दैनन् । दोस्ती लुक्ला बरु, दुश्मनी किन लुक्थ्यो !हुन त कलाकारहरु दोहोरो चरित्र निभाउन खुबै जान्दछन् । दोस्ती क्षणिक भएपनि दुश्मनीको अवधि लामै रहन्छ ।
कलाकार पूजा शर्मा र सुष्मा कार्कीले पनि एक समय दुश्मनी खुब निभाए, अहिले पनि उनीहरु एक–अर्कासँग बोल्दैनन् । एक जना स्थापित निर्देशकका कारण उनीहरुबीच दुश्मनी पैदा भएको बताइन्छ ।
एक समय ती निर्देशक र सुष्मा जोडीका रुपमा चिनिन्थे । उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको सुष्माले यसअघि नै स्वीकारि सकेकी छिन् । निर्देशकले सुष्मा छोडेर पूजा रोजेपछि उनीहरु एक–अर्काको दुश्मन बनेका हुन् । अहिले उनीहरु खुलेआम एक–अर्काको विरोध गर्छन्। अहिले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भेट हुँदा समेत उनीहरु तर्किन्छन्, एक–अर्काको नजिकै पर्दैनन् ।
त्यस्तै, अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह तथा भुवन केसीबीच पनि बोलचाल छैन । चलचित्र ‘ड्रिम्स’ को निर्माण तथा प्रमोशनका क्रममा भुवनले दुर्व्यवहार गरेको साम्राज्ञीको आरोप थियो । यद्यपि, भुवनले भने उक्त आरोप स्वीकारेका छैनन् । उनले साम्राज्ञीविरुद्ध मानहानीको मु द्दा समेत दायर गरेका छन् । लकडाउनको समय उनीहरुको गसिपले नै मनोरञ्जन क्षेत्र तातेको थियो । साम्राज्ञीले दुव्र्यवहारका कुरा उठाउँदा कसैले पनि उनको साथ दिएनन्, उल्टो उनी नै गलत भएको भन्नेहरुको कमि थिएन ।
अभिनेता केसी र राजेश हमाल पनि एक–अर्काका कट्टर दुश्मन हुन् । एक–अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्दा उनीहरुबीच दुश्मनी बढेको बताइन्छ । राजेश हमाललाई महानायक भनेको भुवनलाई मन पर्दैन । केही समयअघि भएको एक कार्यक्रममा भुवनले मुखै खोलेर महानायक कसलाई भन्नेभन्दै प्रश्न गरेका थिए । यस विषयमा लामै समय वहस पनि चल्यो । हमाल भने यस्ता कुरामा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्, मौन रहन रुचाउँछन् ।
नेपाली चलचित्रमा कलाकारबीचको दुश्मनीको कुरा गर्दा नछुट्ने नाम हुन्, अभिनेताद्वय राजेश हमाल र धीरेन शाक्य । कुनै समय यो जोडी सँगै पर्दामा देखिँदा त्यो चलचित्रले पैसा कमाउँछ भन्ने कुरामा निर्माता ढुक्क हुन्थे । समकालिन यी अभिनेताहरुबीच अहिले पनि राम्रो बोलचाल छैन । धिरेन र राजेशले ‘सिमाना’, ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ लगायत चलचित्रमा सहकार्य गरेका थिए ।
अभिनेत्री कृष्टि मैनाली र रेखा थापासँग पनि हमालको नमिठो सम्बन्ध रहेको चर्चा फिल्म नगरीमा खुबै चल्थ्यो । अभिनेत्रीद्वय जल शाह र निरूता सिंहबीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाले दुश्मनी जन्माइ दिएको चर्चा थियो ।
अभिनेता निखिल उप्रेती र रेखा थापाको दुश्मनी पनि सम्झन लायकको छ । जतिबेला अभिनेता निखिल उप्रेती र रेखा थापाको जोडी हिट थियो, त्यसैबेला निखिल र रेखाको दुश्मनीले पनि हिट खायो । ब्याक टु ब्याक हिट फिल्म दिइरहेका निखिल र रेखा ‘इगो’ का कारण एउटै फिल्ममा काम गर्न समेत छोडे । आर्यान सिग्देलसँग पनि रेखाको सम्बन्ध राम्रो छैन । उनीहरुबीच बढेको असमझदारीले उनीहरूमा पानी बारबारकै अवस्था आइलाग्यो । यद्यपि उनीहरु आज–भोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने एक–अर्काको प्रसंसा गर्दै अंकमाल गरिरहेका भेटिन्छन् ।
अभिनेता रमित ढुङ्गाना र अभिनेत्री उषा पौडेल पनि एक–अर्कासँग बोल्दैनन् । यी दुईबीच के कारणले दुश्मनी साँधियो यो भने उनीहरुले कहिल्यै खुलाएनन् । यद्यपि इगोकै कारण सम्बन्ध बिग्रिएको हुन सक्ने धेरैले अनुमान गर्छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा आएर अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माबीच पनि बोलचाल छैन भन्दा पनि हुन्छ । एक समय उनीहरुको प्रेम चर्चा नै चलेको थियो । एक–अर्काको प्रसंसा गरेर नथाक्ने यो जोडी अचेल एक–अर्कासँग बोल्न समेत खोज्दैनन् । बोलचाल बन्द भएपनि यो जोडीले केही म्युजिक भिडियोहरुमा एकसाथ काम गरे ।
उनीहरुबीच चलचित्र ‘रामकहानी’ को क्रममा मित्रता गाँसिएको थियो । चलचित्र रिलिजको केही वर्षपछि उनीहरुको सम्बन्ध चिसियो । के कारणले मित्रता दुश्मनीमा बदलियो, खुलेको छैन । त्यसो त चलचित्र क्षेत्रमा पूजाको सम्बन्ध कसैसँग नि सुमधुर रहेको पाइँदैन ।
दीपक राज गिरी, दिपाश्री निरौला र जितु नेपालबीचको समबन्धमा पनि पछिल्लो समय फाटो आएको छ । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ मा टिमका रुपमा काम गरेका यी कलाकारहरु नबोल्नुका कारण ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ हो । दीपाले पत्रकार प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रम ‘रजतपट’ मा अन्तर्वार्ताका क्रममा राजेश हमालको महानायक पदवीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । राजेशका फ्यानहरुले उनलाई गाली गरेका थिए । उनी विवादमा तानिएपछि जितुले आफ्नो कार्यक्रमको अध्यक्षको कुर्सीबाट दीपालाई हटाएर करिश्मा मानन्धरलाई ल्याएपछि उनीहरु दोस्तबाट दुश्मन बनेका हुन् । अहिले छक्का पञ्जाको टीममा जितु छैनन्, उनीहरुबीच टिमवर्क पनि भएको छैन ।
त्यसो त केही दिनअघि दीपाश्रीले शेयर गरेको एउटा भिडियो स्टोरीमा दीपकराज र जीत अंगालो हाल्दै श्रीकृष्ण भगवानको भजनमा नृत्य गर्दै गरेको समेत देखिएको छ ।
एक समय पल शाह र आँचल शर्मा पनि एक–अर्कासँग बोल्दैन थिए । चलचित्र क्षेत्रमा उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा समेत गेको थियो, केही समयपछि उनीहरुको ब्रेकअपको समेत हल्ला चल्यो । भन्नेहरुले त ब्रेकअप भएपछि उनीहरुबीच बोलचाल बन्द भएको हो समेत भने । तर मिडियामा भने आँचलले बोलचाल बन्द भएको आभाष दिइनन्, उनी अन्तर्वाताका क्रममा पलको प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन्छिन् । पलको प्रसंसा गरेर थाक्दिनन् । तरपनि बिहेपछि पल- अाचल एकसाथ भिडियोमा देखिएका छैनन् । अहिले आँचल उदिप श्रेष्ठसँग वैवाहिक जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
Prevपिडित किशोरीको बयान : ‘म त्यतिबेला निकै दुब्लो थिएँ , उसको झट्काले म कोठाको अर्को भागमा पुगें , त्यसपछि ऊ ममाथि आयो’
Nextकफी सप खोल्ने तयारीमा अनमोल !
चुनावको मुखमा काङ्ग्रेसका ठुला नेताको निधन